Dell UltraSharp dia monitor 8K izay tsy mamela olona tsy hiraharaha | Vaovao momba ny gadget
Dell UltraSharp dia monitor 8K izay tsy mamela olona tsy hiraharaha
Ny fanapahan-kevitra no ady lehibe tato anatin'ny taona vitsivitsy. Misy ihany ny fitaovana vitsivitsy izay manana capacities ambonin'ilay Full HD mahazatra, toy ny MacBook Pro Retina miaraka amin'ny efijery 2K, ny 5K iMac izay ny fanapaha-keviny dia ampahan'ny anarana, ary ny fahitalavitra maro ao amin'ny vahaolana 4K Ultra HD izay manomboka mipetraka. ireo fivarotana. Na izany aza, ny fanapahan-kevitry ny Full HD mahazatra dia mbola misy indrindra ho an'ny atiny sy ho an'ny karazana takelaka rehetra. Tsy midika izany misy foana ny orinasa mikasa ny hanome izay ilain'ny olona be mpitady indrindra, ohatra ny Dell sy ny efijery UltraSharp 8K izany dia manana toetra mampijaly tena.
Mety ho very ny masonao manandrana mitady pixel ao ity monitor 8K ity izay entin'i Sharp ho an'ny marefo indrindra. Sarimihetsika tena tsara, saingy tsy azon'ny mpampiasa antonony. Ny vidiny dia mandrara, araka ny azonao an-tsaina, mihoatra ny 5.000 euro.
Izy io dia manana vahaolana 7680 × 4320 amin'ny 31,5 santimetatra, izay miteraka hakitroka isaky ny santimetatra 280. Hitanay mpifaninana lehibe ho an'ny tontonana 5K ampidirin'i Apple ao amin'ny iMac, na dia misy vidiny ambony lavitra aza, ary tsy misy atiny azo alaina, farafaharatsiny mora azo. Manontany tena izahay raha toa ka ampidirin'i Dell sary 8K ho an'ny mpanara-maso azy.
lamentably tsy manana teknolojia HDR, fa raha manana elanelana amin'ny 100% AdobeRGB, 100% sRGB, 100% Rec. 709, ary 98% DCI-P3. Mazava ho azy, hahafaly ireo matihanina amin'ny sary izany. Ho fanampin'izany, ny fotony dia hamela anao hanodina ny monitor mba hampiasantsika azy amin'ny lafiny mitsivalana sy amin'ny fomba mitsivalana. Mampalahelo fa na dia amin'ny solosaina PC tsara indrindra na amin'ny PlayStation 4K aza dia ho azontsika atao ny mankafy ny vahaolana tena izy ambonin'ny 4K. Tsy ilaina ho an'izay tia ny efijery tsara, fa raha fampisehoana teknolojia ahafahantsika misaotra an'i Dell izany dia ho taonan'ny fanapahan-kevitra lehibe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Dell UltraSharp dia monitor 8K izay tsy mamela olona tsy hiraharaha
John A PM dia hoy izy:
Maniry ny farany indrindra foana?
Valiny tamin'i Juan A Pm
Vidio ary omeo ahy ny fahitalavitrao?
Raha toa ka fanaraha-maso ny solosaina
MyKronoz ZeTime dia mifangaro eo amin'ny smartwatch sy ny fiambenana analog